September 13, 2021 - Babal Khabar
Sep132021 by बबाल खबरNo Comments
यी ४ राशीका मान्छे हुन्छन असाध्यै भाग्यमानी र बलिया राशि, तपाईंको कुन ?
पढनु पहिले माथि follow गर्नुहोला । ज्योतिषी भाषाअनुसार हाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ। आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ?जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला । यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्या कुराको खुलासा पनि तपाईको कुंडलीले गर्छ। तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ । जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुवी स्वतः उसभित्र प्रेवश गर्छ । ज्य
हनुमानको तस्वीर यसरी मिलाएर राख्न जाने मिल्छ यस्तो सफलता !
धार्मीक मान्यता अनुसार हनुमान अजर–अमर छन् । त्यसैले उनी हरेक युगमा रहन्छन् भन्ने मान्यता छ । हनुमानलाई कलियुगको सबैभन्दा प्रभावशाली देवता मध्ये एक मानिन्छ । हनुमान चाँडै प्रसन्न हुने देवता हुन् । त्यसैले वास्तु नियमको पालना गर्दै घरमा हनुमानको मूर्ति वा तस्वीर राखे जीवनमा सबै समस्या न ष्ट भई सफलता प्राप्त हुने मान्यता छ । १. वास्तुको नियम पालना गर्दै घरमा हनुमानको मूर्ति वा तस्वीर राखेमा घरमा रहेको नकारात्मक उर्जा नष्ट हुने धार्मीक मान्यता छ । २. वास्तु शास्त्रका अनुसार दक्षिण दिशाको पर्खालमा हनुमानको तस्वीर राख्नु सबैभन्दा शुभ मानिन्छ । हनुमानको शक्ति अधिक प्रभाव दक्षिण दिशामा हुने गर्दछ । ३. दक्षिण दिशाबाट आउने नकारात्मक ऊर्जा र खराब शक्ति नष्ट गर्न र घरमा सकारात्मक उर्जा बनाइराख्न दक्षिण दिशामा हनुमानको बसेको मुद्राको रातो रंगको तस्वीर राख्नु पर्दछ । ४. वास्तु अनुसार
आइफोन बोक्नेलार्इ अायो यस्तो एप्पलको चेतावनी ! आइफोन बोक्नेले मात्र पढ्नुहोला
आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि एक चेता वनी जारी गरेको छ । एप्पलले उच्च क्षमतायुक्त तथा गतियुक्त मोटर साइकलमा तीव्र गतिमा यात्रा गरिरहँदा आइफोन प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ । यसो गर्नाले आइफोनको क्यामरामा असर पर्ने र क्यामरा बिग्रिन सक्ने एप्पलको भनाइ छ । आफ्नो सपोर्ट पेजमा एप्पलले उक्त जानकारी प्रकाशित गर्दै भनेको छ कि हाइ पावर इन्जिनयुक्त मोटरसाइकलबाट उठ्ने भाइब्रेसन अर्थात् कम्पन र तरंगहरुले आइफोनको क्यामरामा अस र गर्न स्क्दछ । एप्पलले आफ्ना कतिपय आइफोनका मोडलहरुमा उच्च प्रविधियुक्त क्यामरा प्रणाली राखेको छ । जसको माध्यमबाट अप्टिकल इमेज स्टाबिला इजेसन तथा क्लोड्ज लुप अटोफोकन प्रविधिबाट कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि उत्कृष्ट तस्वीर खिच्न सकिन्छ । उक्त प्रविधिले कुनै पनि हलचल, कम्पन तथा गुरुत्वा कर्षणको अस रलाई निस्तेज पार्दछ र उत्कृष्ट तस्वीर खिच्नमा
बलिउडमा मात्रै नभएर प्रियंका चोपडा विश्वभर चर्चामा रहेकी छिन् । उनको एक पुरानो अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । अभिनेत्री चोपडाले आफ्नो करियरको शुरुका दिनहरूको बारेमा कुरा गरेकी छिन् । प्रियांकले सन् २००३ को ‘अन्दाज’ बाट मुख्य अभिनेत्रीको रूपमा बलिउडमा प्रवेश गरेकी थिइन् । त्यो फिल्मको गीतको शुटिङ्ग को क्रममा जब प्रियांकले ४० रिटेक पछि पनि उचित शट दिन सकिनन् तब कोरियोग्राफरले उनलाई हप्काएका थिए । कोरियोग्राफरबारे प्रियंकाले भनिन्, ‘त्यो मेरो पहिलो गीतहरू मध्ये एक थियो । त्यो समयमा मैले धेरै कुरा प्राप्त गर्न बाँकी थियो ।मलाई याद छ कि जब शट ४० टेक पछि पनि बाहिर आउन सकेन, कोरियोग्राफर राजु खान (सरोज खानका छोरा) ले माईक फ्याँक्यो र भन्यो–तपाईं मिस वर्ल्ड हुनुहुन्छ, किनकी तपाईंलाई लाग्छ कि अभिनेत्री बन्न सक्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् कसरी नाच्ने, सिक्नुहोस् ।’ प्रिय
दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित जोडी सामन्था र नागा चैतन्यको डिर्भो’स हुँदै ?
खबर पहिले यो भिडियो हेर्नुस, एजेन्सी- दक्षिण भारतीय फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री सामन्था अक्किनेनी र अभिनेता नागा चैतन्यको डि'र्भोष हुन लागेको बताइएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार फिल्मको काम छोडेर परिवारको संख्या बढाउन भन्ने नागाको चाहानामा सामन्था सहमती हुन नसकेपछि यो जोडी छु'ट्टिन लागेको बताइएको छ । सन् २०१७ मा विवाह गरेका उनीहरु दक्षिण भारतीय फिल्मकै सुन्दर जोडीको रुपमा परिचित छन् । केही समय अघि देखि उनीहरुको वैवाहिक जीवन ठिक ढं'गले न'चलिरहेको खबर बाहिर आएको थियो । यो जोडीले हालै मात्र म्यारिज का'उन्सलरसँग भेटघाट गरेका छन् । विवाह पछि सामन्थाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नामको पछाडि अक्किनेनी लेखेकी थिइन् । उनी कैयौंपटक सामाजिक सञ्जा'लमा नागासँगको तस्वीर राख्छिन् । यद्यपि नागा सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय छैनन् । तर केही समय अघि सामन्थाले सामाजिक सञ्जालबाट अक्कि'नेनी हटाएपछि उनी
छोरीको बिहेको माहोल छ। कोभन्दा को कम हुनै प¥यो। त्यसमाथि आहान नै छ, ‘छोरीभन्दा आमा तरुनी देखिनुपर्छ।’ कहिलेकाहीँ सुन्दर देखिने लोभमा त्यसले उल्टै दुलाहा र उनको जोरीपारीलाई टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुनसक्छ तर छोरीको बिहे हो, अरुलाई के मतलब ? बेलायतको मिरर पत्रिकाले हालै यसबारे खबर प्रकाशित गरेको छ। भयो के भने छोरीको बिहेमा आफू पनि मस्त तरुनी देखिनु प-यो भनेर दुलहीकी आमाले एउटा बिहेको पहिरन अनलाइनबाट किनिन्। अब कुनै पसलमा किनेको भए पो, बेच्न बसेकाले सुहायो या सुहाएन भनेर प्रतिक्रिया दिन्थे र मन पनि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्थ्यो ! अनलाइनबाट किनेपछि त्यो परीक्षणको कुरा पनि भएन, उनलाई सुझाव दिनेहरु पनि कोही भएनन्। त्यसैले त्यो पहिरन लगाएर उनी बिहेको दिन पुगिन्। पहिरन कस्तो भने, छातिको भाग चिरिएको ! बिहे हुने बेलामा अन्तिम अवस्थामा मात्र दुलहीकी आमालाई यस पहिरनको गम्भीरता बुझिन् तर अन्तिम
रातमा बारम्बार बिउँझनु हुन्छ ? सावधान हुनुस असामायिक मृ’त्युको संकेत हुनसक्छ!
एक अध्ययनका अनुसार रातमा बारम्बार बिउँझिने महिलाहरुको कम उमेरमा मृ'त्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ८ हजार पुरुष र महिलाहरूमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रातिमा बारम्बार निन्द्रा खुल्नुका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । यो मस्तिष्कको एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । हात गोडामा अचानक पी डा हुनु, दुख्नु, कुनै पनि प्रकारका ट्रमा वा सास फेर्न समस्या हुनु जस्ता समस्याले रातिमा नि न्द्रा अचानक खुल्न सक्छ । यसका कारण पर्याप्त नि'दाउन सकिदैन । यसलाई (unconsc ious wakefu lness) भनिन्छ । अष्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको अनुस'न्धानमा यस्तो समस्या बारम्बार हुनुको पछाडि उच्च र'क्तचाप वा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएको पत्ता लागेको छ । अनुस'न्धानको क्रममा तीनवटा अलग–लगत डाटाको प्रयोग गरिएको थियो । सहभा गीहरुलाई एक रातभर निदाउँदा
२३ वर्षीय छिमेकी युवतीले भित्री वस्त्र सुकाएर आफ्नो श्रीमानलाई उत्तेजित पारेको भन्दै यस्तो गरेपछी…..
एजेन्सी । हेर्नुसि भिडियो । मेक्सिकोस्थित क्विनटाना रोका प्रहरीले एउटा निकै अचम्मको उजु'री पाएका छन् । त्यहाँकी एक महिलाले आफ्नी २३ वर्षीय छिमेकीमाथि देखिने गरी भित्री वस्त्र सुकाएकोमा आपत्ति जताउँदै उजु'री नै दर्ता गरेकी छिन् । उनको अनुसार ती छिमेकीले उनका श्रीमानलाई उ'त्तेजित पार्न यसो गरेकी हुन् ।४२ वर्षकी युभित्जा इले आफ्नी ‘नि'र्लज्ज’ छिमेकीलाई ‘नै'तिकता र सभ्यता’ बिर्सिएको आ’रोप लगाएकी छिन्। उनले प्रहरीलाई उनकी छिमेकीको व्यवहार कुनै संयोग नभएको बताएकी छिन् । युभित्जाले प्रहरीलाई ती महिलालाई नैतिकता र सभ्यता बिर्सिएकोमा प’क्राउ गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।उनले प्रहरीसमक्ष भनिन्, ‘मेरा श्रीमान् घरमा भएकै बेला, शनिवार दिउँसो उनले सधैँ आफ्नो थो'ङ्ग (भि'त्री वस्त्र) धोएर सुकाउँछिन् । मैले मेरा श्रीमानलाई सधैँ छिमेकीको भित्री वस्त्र घुरेर हेरेको देखेकी छु । मैले उनलाई मेरा श्रीम
शा’रीरिक सम्पर्क गर्दा क’ण्ड’म फुटे के गर्ने ? जान्नुस
भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोला , आफ्नो पार्टनरसँग गर्भ निरो'धकका लागि या अपरिचितसँग यौ’नस’म्पर्क गर्दा क'ण्डम प्रयोग गर्नुभएको बेला फुट्यो भने तपाईलाई कम्ती तना'व हुँदैन । त्यसमा पनि अपरिचितसँग यौ’नस’म्पर्क गरेको बेला क'ण्डम फ्टेर्मा कैयन् आशं'का जन्मिन सक्छन् ।’त्यसैले यदि तपाईले क'ण्ड'म प्रयोग गर्दा पनि सही ढंगले गर्नुभएन या कुनै कारणले त्यो फु'ट्यो भने के गर्ने त ? विवाहपूर्व यौ’नसम्प’र्क भएर गर्भ रहँदा त्यस्तो ग'र्भ अनि'योजित मात्र हुने होइन, अनिच्छित पनि हुन्छ र अनेक समस्या सिर्जना हुनसक्छ। कतिपय बेला योजना अनुसार बच्चा जन्मा'उन खोजिएको बेला यस्तो समस्याले थप चिन्ता बढाउन सक्छ ।युवावस्थामा यौ’नइच्छा एकदमै तीव्र हुने भए पनि यौ’नस’म्पर्क र त्यसका असरका लागि हामी पूर्णरूपमा तयार हुँदैनौं। केही जानकारी भए पनि यौ’नसम्बन्धमा आवश्यक सीप नहुन सक्छ। त्यसैले आइपर्न सक्ने स्थितिका ला